Ungawabonisa njani amanani
Izinto ezichaseneyo zichasene nokusasazwa. Xa usasaza, uphinda-phinda uthotho lwamagama ngento eqhelekileyo. Xa ubhala izinto, ufuna ukufumana ukuba uthotho lwamagama afanayo kwaye uyayisusa, wahlulahlula into eqhelekileyo kwikota nganye.
Cinga ngekota nganye njengenani elingasentla uze ufumane idinomineyitha efanayo kwikota nganye. Ngokufaka izinto ngaphandle, into ibekwa ngaphandle Iibakaki okanye iibrakethi kwaye zonke iziphumo zesahlulo zishiye ngaphakathi.
Inkqubo ye- efanelekileyo Indlela yokujonga intetho kukubhala eyona nto iphambili kwinani ngalinye kwaye ujonge eyona nto ixhaphakileyo. Eyona ndlela isebenzayo kwaye ikhawulezayo kukujonga eyona nto inkulu onokuyibona ngokulula . Yikhuphe kwaye ubone ukuba amanani angaphakathi kwabazali kufuneka abuyiselwe kwakhona. Phinda ulwahlulo kude kube yimigqaliselo engaphakathi kubazali.
lixesha lokuthatha i-valtrex
Umzekelo: Landela la manyathelo ukukhupha intetho
Chonga into eqhelekileyo.
Into eqhelekileyo ngu-2.
Yahlula ikota nganye ngento eqhelekileyo kwaye ubhale iziphumo zokwahlula kubazali, kunye nomba ophambili.
Iziphumo zerhasi x
Chonga ukuba ngaba ungawabonisa amanye amagama.
Amagama ashiyekileyo kubazali asemakhulu kakhulu. Zonke zisengumcimbi oqhelekileyo we-4. Ukhupha amanqaku ngo-4, ufumana:
Yenza lula impendulo.
Ukuba ukhupha u-4 emva kokukhupha u-2, imveliso ka-4 no-2 (eyi-8), sisixa esipheleleyo osikhuphileyo. Impendulo yokugqibela ithi
ndingayithatha i-mucinex kunye ne-sudafed kunye
Uyenza njani imigangatho kwiminecraft
iziphumo ebezingalindelekanga ze-shingrix
iziphumo ebezingalindelekanga ze-r-lipoic acid
yenza iipilisi zekonofile
yintoni i-flexeril 10mg esetyenziselwa
ibhedi yesikhonkwane ibuhlungu xa icinezelwe